"ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲများ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲများ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲများ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၆:၂၉၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၂၂၀၈၃ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
Reverted to revision 493297 by Kaung Set Win (talk): Restoring. (TW)
၁၄:၂၃၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Thit Lwin Htoo09895070 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
၁၆:၂၉၊ ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(Reverted to revision 493297 by Kaung Set Win (talk): Restoring. (TW))
ထိုအခါ ခရစ်ယန်တို့သည် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ မိမိတို့
ကရူးဆိတ်(Crusade)ဆိုတာ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်တွေတိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲလို့ သိကြမှာပါ။ ကရူးဆိတ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူ ခရစ်ယာန်ဝါဒရဲ့ အပြင်ရန်သူ၊ အတွင်းရန်သူတွေကို နှိမ်နှင်းခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မိုဟာမက်ရဲ့ ခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ချိနည့်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ စတင်ဓားထက်လာခဲ့ကြပြီး နောက်ရာစုနှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ မြောက်အာဖရိက၊ အာရှမိုင်းနား၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ စပိန်တို့ကို မွတ်ဆလင်တွေအောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၁ရာစု အရောက်မှာတော့ ဆဲဂျု့တူရကီ(Seljuk Turk)တွေဟာ ဂျေရုစလင်မှအပ ပါလက်စတိုင်းဒေသ တခုလုံးနီးပါးကို စိုးမိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တူရကီတို့ဟာ ထိုနေရာမှာတင် မရပ်တန့်ဘဲ အရှေ့ရောမအင်ပါယာရဲ့ မြို့တော်၊ အရှေ့ပိုင်းခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ဗဟိုချက် ကွန်စတန်တီနိုပယ်(Constantinople) မြို့ကို ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့ပြီး အနောက်ဥရောပကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့တဲ့အတွက် ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကလဲမွန့်ကောင်စီ အစည်းအဝေးပွဲမှာ သာသနာပိုင် ရဟန်း အာဘန်(Pope Urban II)ဟာ ၁၀၉၅ခုနှစ်မှာ အနောက်ဥရောပနဲ့ ခရစ်ယာန်နယ်မြေတွေကို ကာကွယ်ကြပါစို့ ဟူ၍ ဆော်သြခဲ့သည့်နောက်မှာတော့ ပထမခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီး စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ဝတ်ဆင်ရပြီး အမျိုးမျိုးသော မက်လုံးများကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ (ပထမ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကို အချို့သော သမိုင်းဆရာတို့က ပုတ်အာဘန်ရဲ့ လောဘတက်မှု့ကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။)
အထွတ်အမြတ်ထား ရာဖြစ်သော သောမြေကို ဆာရဆင် ခေါ်
သည့် ဆဲလဂျွတ်တစ်ရက်တို့လက်မှ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်
ကြိုးစားကြကုန်၏။ ဤသို့ဖြင့် ၁၁ ရာစုနှစ်မှ ၁၃ ရာစုနှစ်
တိုင်အောင် ကရူးဆိတ် စစ်ပွဲပေါင်း ရှစ်ကြိမ်မျှ ဖြစ်ပွားခဲ့လေ
သည်။ ပထမကရူးဆိတ်စစ်ပွဲမျာ ၁ဝ၆၉ ခုမှ ၉၉ ခုနှစ်အတွင်း
ဖြစ်ပွားခဲ့၏။ ဂျေရုဆလင်၌ ခရစ်ယာန်တို့အား ဆာရဆင်များက
ညှဉ်းပန်းပုံကို ထိုအတိုင်းကြည့်နေလျှင်၊ ကဲသည်ထက် ကဲလာ
၍ ခရစ်ယန်အယူဝါဒအား လွှမ်းမိုးသွားမည်ကို စိုးရိမ်ရသဖြင့်၊
ကလားမွန်မြို့တွင် အယူဝါဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပ
၍ ဆာရဆင်တို့အား တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ထိုအရေးတွင် ပီတာ-သ- ဟာမစ်သည် အယူဝါဒ စော်ကားသူ
ဆာရဆင်တို့အား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရန် ဥရောပတစ်ခွင်သို့
ဥရောပမှ လူအများသည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သို့ ချီတက်၍
ဂျရူးဆလမ်းမြို့ကို သိမ်းပိုက်ရန် တပ်ကြီး နှစ်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့
သည်။ တပ်တစ်တပ်ကို ပီတာ-သ-ဟာမစ် က ခေါင်းဆောင်၍
ကျန်တပ်တတပ်ကို ဝေါ်လတာ-သ-ပဲနီလက် အမည်ရှိ
ပီတာခေါင်းဆောင်သောတပ်မှာ ကတိုက်ကရိုက် တပ်ဖွဲ့၍
အနောက်ဥရောပ ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့ဟာ ရေမွန်(Raymond)၊ ဂေါ့ဖရေး(Godfray)၊ ဟု(Hugh)၊ ဘဟီးမွန့်(Bahemond) တို့၄ယောက် ဦးဆောင်တဲ့ စစ်တပ် ၄ခုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ထို့ပြင် သာမန်လယ်သမားအများအပြားနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်တပ်တခုလည်း ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပြီး ပြည့်သူ့တပ်ဖွဲ့ လို့ခေါ်ဝေါ်ကြကာ ပီတာက ဦးဆောင်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ မှာတော့ ခရစ်ယာန်တပ်များနှင့် မွတ်ဆလင်တပ်များ ပထမဆုံးထိတွေ့မှု့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တူရကီတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြပြီး အနောက်ဥရောပကို ကျူးကျော်မယ့် အကြံအစည်များလည်း ပျက်စီးခဲ့ကာ ဆုတ်ခွာရာ လမ်းတလျှောက်ရှိ ဂျူးခရစ်ယာန် ရွာများကို ရသလောက် ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့ကြီး လေးခုစလုံး ကွန်စတန်တီနိုပယ်သို့ အရောက်မှာတော့ ဘိုင်ဇန်တိုင်း ဘုရင် အဲလစ်ရှက်(Alixius)ဟာ တူရကီလက်အောက်ကျရောက်နေတဲ့ ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပါယာရဲ့ မူလနယ်မြေများကို သိမ်းပိုက်ရရှိပါက သူ့ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် အခြားသော တူရကီနယ်မြေများကိုတော့ သိမ်းပိုက်နိုင်သူက အုပ်ချုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
ထွက်လာကြသဖြင့်၊ အစီအစဉ်လည်း မကျန၊ လက်နက်လည်း
မပြည့်စုံချေ။ ထို့ပြင် အရှေ့နိုင်ငံများသို့ ချီတက်ရာလမ်းခရီး
သည် ပင်ပန်းခက်ခဲလှ၍၊ ပါလက်စတိုင်းသို့ မရောက်မီကပင်
တပ်သားများ သေကြပျက်စီးကြသဖြင့် အရေးမလှခဲ့ချေ။ သို့ရာ
တွင် ဝေါ်လတာ ခေါင်းဆောင်သည့်တပ်ကား ကွန်စတန်တီနို
ထိုတပ် ၂တပ် ထွက်သွားပြီးမှ မင်းညီမင်းသားများနှင့် သူရဲ
၁၀၉ရ မေလမှာတော့ ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာနဲ့ ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ နီချီယာကို စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဇွန်လမှာတော့ ဆဲဂျု့တူရကီတို့ရဲ့ မြို့တော် အနာတိုလီယာ လက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ ၁၀၉၈ ဇွန်လမှာတော့ ဆီးရီးယန်း မြို့တော် အန်တီအော့ကိုပါ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀၉၉ မှာတော့ ဂျေရုစလင်မြို့ကိုပါ လုံခြုံအောင် စီမံပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ပထမခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီး မှာတော့ ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့များဟာ အောင်မြင်မှု့များဖြင့် ပြည်တော်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကောင်း မြောက်မြားစွာ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်သည့် စနစ်တကျ
ကျင့်သားရပြီးသော တပ်များသည် ပါလက်စတိုင်းပြည်ဘက်သို့
ဆက်လက် ချီတက် တိုက်ခိုက်ရာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်
ခရစ်ယန်တို့ဖက်မှ အကျအဆုံး များသလောက် ဆာရဆင်တို့
ဘက်မှလည်း အပျက်အစီး နာလှသည်။ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ
မြို့ကြီးများကို သိမ်းပိုက်နိုင်၍ ၁ဝ၉၉ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့၏
ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ဂျရူးဆလမ်းမြို့ကြီးကို သွေး
ချောင်းစီးမျှ တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် သိမ်းပိုက်ကြသည်။ ထိုအခါ
တွင် ကရူးဆိတ်စစ်တပ်များဖက်မှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်
သော ဗူယွန်မြို့သား ဂေါ့ဖရီအား ဂျရူးဆလမ်းဘုရင်အဖြစ်
တင်မြှောက်၍ သေဉ်မြေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ထားခဲ့
ထိုစဉ်က ကရူးဆိတ်စစ်တပ်များတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲသူများမှာ
*ဒုတိယကရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၁၄၇-၁၁၄၉|၁၁၄၇-၁၁၄၉]])
ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ထူးနှင့် ကျော်စောခြင်းကိုသာမက၊ လယ်ယာ မိုးမြေ
ရွှေငွေအများလည်း ရရှိကြသည်။ ထိုကြောင့် နောင်ခေတ်များ၌
ကရူးဆိတ်စစ်တပ်ကြီးများတွင် လိုက်ပါ တိုက်ခိုက်လိုသူများ
အတော်ပင် ပေါများခဲ့၏။ သို့သော် ထိုသူများမှာ အယူဝါဒ
အတွက် တိုက်ခိုက်ခြင်းထက် မိမိတို့ကျော်စောကိတ္တိရှိမှု၊ ချီ
တက်ရာလမ်းမှ ပြည်နယ်များကို လုယက်တိုက်ခိုက်လိုမှုများ
အတွက် လိုက်ပါသူက ပို၍များပြားလေသည်။
၁၁၄၇ ခုနှစ်မှ ၄၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ဖြစ်
ပထမခရူးဆိတ်စစ်ပွဲမှာ မြန်မြန်အောင်ပွဲရခဲ့ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာ အချို့က ပြည်တော်ပြန်ကြပြီး အချို့က အောင်ပွဲရနယ်မြေများကို အုပ်ချုပ်ရန် ကျန်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ နယ်မြေများကို ဂျေရုဆလင်၊ အီဒစ်ဆာ၊ အန်တီအာ့နှင့် ထရိုပိုလီ ဟူ၍ နယ်မြေလေးခု ခွဲခြားထားပြီး ထိုနယ်မြေများကို ကရူးဆိတ်ပြည်နယ်များ(Crusades States)ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၁၃၀ အရောက်မှာတော့ ဆဲဂျု့တူရကီတို့ဟာ အစ္စလာမ်တို့ရဲ့ ရန်သူများကို တွန်းလှန်ကြဟူ၍ ဂျီဟတ်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီး စစ်အင်အား ပြန်လည်စုဆောင်းခဲ့ကြပါတာ်။ ၁၁၄၄ခုနှစ်မှာတော့ မိုဆိုးဘုရင်ခံ ဆဲဂျု့စစ်သူကြီး ဇန်ဂီဟာ အီဒစ်ဆာကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွားပြန်သည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် ပြင်သစ်ဘုန်းကြီး စိန်ဗါးနဒ်က
ဆော်ဩ၍၊ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ တတိယကရူးဆိတ်တပ်ကြီးသည်
ပါလက်စတိုင်းဖက်သို့ ချီတက်ခဲ့၏။ သို့သော် စီမံခန့်ခွဲမှု
ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ပါလက်စတိုင်းသို့ မရောက်မီပင် မရှုမလှ
အရေးနိမ့်၍ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာလာခဲ့ကြရသည်။
ထိုနောက် အနှစ်လေးဆယ်ခန့်တွင် ထင်ရှားလှသော မွတ်
အီဒစ်ဆာ ကျသွားတဲ့သတင်း ဥရောပသို့ အရောက်မှာတော့ အနောက်ဥရောပအုပ်စုဟာ ဒုတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲရန် လူစုခဲ့ကြပြီး ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝစ် ရ(Louis VII) နှင့် ဂျာမနီဘုရင် ကောနာ့ ၃(Conard III) တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၁၄ရ အောက်တိုဘာလမှာတော့ ကော်နာ့တပ်ဖွဲ့များက ဒိုရီယေလမ်ကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဂျေရုဆလင်သို့ဝင်ကာ တပ်ကို ပြန်လည်စုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်လူးဝစ်နဲ့ ကော်နာ့တို့ဟာ ဒမတ်စကပ်မြို့ကို ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီး ဒမတ်စကပ်အုပ်ချုပ်သူများဟာ ဘုရင် နာအယ်ဒင်(Nur Al Din)ကို စစ်သူကြီးဇန်ဂီအား စစ်ကူစေလွှတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ စစ်သူကြီး ဇန်ဂီအရောက်မှာတော့ ဒမတ်စကတ်စစ်တပ်နဲ့ ဇန်ဂီ့စစ်တပ်တို့ရဲ့ နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းတိုက်ခိုက်မှု့ကြောင့် လူးဝစ်နဲ့ကော်နာ့တို့ အရှုံးကြီး ရှုံးကာ တပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
စလင်ခေါင်းဆောင် ဆဲလဒင်းဘုရင်က ဂျရူးဆလမ်းမြို့ကို
တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်သဖြင့် တတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ (၁၁၈၉-
<nowiki>*</nowiki>တတိယကရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၁၈၉-၁၁၉၂|၁၁၈၉-၁၁၉၂]] )
မှာ ဖရက်ဒရစ် ဗါဗရော့ဆာ ဧကရာဇ် ဘုရင်၊
ပြင်သစ် ဘုရင် ဖိလစ်နှင့်အင်္ဂလန်ပြည်ဘုရင် ပထမ
ရစ်ချတ်တို့ဖြစ်လေသည်။ ဖရက်ဒရစ် ဗါဗရော့ဆာမျာ အာရှ
မိုင်းနားသို့ရောက်၍ မြို့တစ်မြို့သိမ်းပြီးမှ မြစ်တစ်မြစ်ကို ဖြတ်
ကူးစဉ် ရေနစ်၍ ကံကုန်လေသည်။ ထိုကြောင့် ရစ်ချတ်နှင့်
ဖိလစ် နှစ်ဦးသာ ခေါင်းဆောင်၍ ဂျရူးဆလမ်းမြို့သို့ ချီတက်ခဲ့
ကြရသည်။ သို့သော် ဧကမြို့ကို သိမ်းပိုက် ကြပြီးသော် ထို
ခေါင်းဆောင် ဘုရင်နှစ်ဦးတို့ သဘောကွဲလွဲကြသဖြင့် ဖိလစ်
သည် တပ်ခေါက်၍ ပြန်လာခဲ့သည်။ ရစ်ချတ်တဦးတည်း
ပါလက်စတိုင်းတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့၍ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေပြီး
နောက် မြှော်လင့်ချက် မရှိလှသဖြင့် ဆဲလဒင်းနှင့် စစ်ပြေငြိမ်း
ရေးစာချုပ် ချုပ်လေသည်။ ထိုစာချုပ်ဖြင့် ခရစ်ယန်ဘုရားဖူး
များအား မွတ်စလင်တို့က မနှောင့်ယှက်ရန် ဆဲလဒင်းထံမှ
စတုတ္ထကရူးဆတ်စစ်ပွဲတွင် ဖလန်းဒါးနယ်စား ကောင့်
ဂျေရုဆလင်တွင် အခြေစိုက်နေသော ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များဟာ ဒမတ်စကပ်တိုက်ပွဲမှာ ဘုရင် နာအယ်လ်ဒင်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပြီးနောက် ကိုင်ရိုကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုင်ရိုမြို့မှာ ၁၁၆၉ခုနှစ်ကတည်းက ကရူးဆိတ်တို့လက်မှ စစ်သူကြီး ရှာကူး(Shirkuh) တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာကူးဟာ ၁၁၇၄မှာ သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဆလာဒင်ဟာ စစ်သူကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီး နာအယ်လ်ဒင်ဟာလည်း ၁၁၈ရမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နာအယ်ဒင်သေဆုံးပြီးနောက် ဆလာဒင်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး တတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင် ဆလာဒင် ဦးဆောင်၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟာတင်တိုက်ပွဲမှာတော့ ဆလာဒင်ဟာ ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး နယ်မြေချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗေါ်လဒွင် ခေါင်းဆောင်၍ ပါလက်စတိုင်း ပြည်ဖက်သို့
ချီတက်သော်လည်း၊ ဗင်းနစ်မြို့အရောက်တွင် ကွန်စတန်တီနို
ပယ်မြို့မှ စစ်ကူခေါ်သဖြင့် ထိုမြို့သို့ သွားရောက်ကာ ဧကရာဇ်
ဘုရင်အား နန်းပြန်တင်ရေးကို ကူညီရလေသည်။ ထိုကြောင့်
ပါလက်စတိုင်းသို့ပင် မရောက်ဘဲ ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကို
ကရူးဆိတ်တပ်သားများက တိုက်ခိုက်လုယက်ကြ၏။ ဧကရာဇ်
ဘုရင် ကွယ်လွန်သည့်အခါ ဗော်လဒွင်သည် ထီးနန်းကို
ပဉ္စမ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ (၁၂၂၈-၂၉) တွင်ကား
အင်္ဂလန်ဘုရင် ရစ်ချတ်(Richard I)၊ ပြင်သစ်ဘုရင် ဖိလစ်(Philip II)၊ ဂျာမနီဘုရင် ဘာဘာရိုဆာ(Fredrik Barbarossa) တို့က တတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲတွင် ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၁၉၁ စက်တင်ဘာမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အာစွပ်တိုက်ပွဲမှာ ရစ်ချတ်ဘုရင်ဟာ ဆလာဒင်ကို အကြီးအကျယ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဂျေရုဆလင်သို့ ဆုတ်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ဆလာဒင်ဟာ ဂျက်ဖာမြို့ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ဆက်လက်ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ရစ်ချတ်ဘုရင်ဟာ စစ်ဆက်လက်တိုက်လိုစိတ်မရှိတော့ပဲ ဆလာဒင်နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုကာ အင်္ဂလန်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ တတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲအပြီးမှာတော့ ဆလာဒင်ဟာ အီဂျစ်၊ဆီးရီးယားနှင့် ဂျေရုဆလင်ကိုပါ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ဘုရင်ရစ်ချတ်ဟာ အင်္ဂလန်သို့ ၁၁၉၄ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၁၉၉ခုနှစ် အသက် ၄၁နှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆလာဒင်ဟာလည်း ၁၁၉၃ခုနှစ်တွင် အဖျားရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအပြီးမှာတော့ မွတ်ဆလင်များဘက်က ဆလာဒင်အား အဘယ့်ကြောင့် ခရစ်ယာန်အုပ်စုကို ပါလက်စတိုင်းဒေသ အပြင်သို့ရောက်အောင် မတိုက်ထုတ်ရသနည်းဟု အပြစ်တင်ခဲ့ကြပြီး ခရစ်ယာန်များဘက်မှ ရစ်ချတ်ဘုရင်အား ပါလက်စတိုင်းဒေသကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရအောင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အရှုံးထဲမှ အမြတ်ရအောင် ယူခဲ့သူဟူ၍ ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ (သမိုင်းဆရာများရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ တတိယကရူးဆိတ်စစ်ပွဲမှာ နှစ်ဖက်တပ်များ လူအဆန်ဆုံး စစ်ပွဲဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘက်မှ ဆလာဒင်ကလည်း စစ်စည်းကမ်းနှင့် ဘာသာရေးစည်းကမ်းများအရ သူ၏စစ်တပ်ကို တင်းကြပ်ခဲ့သလို ရစ်ချတ်ဘုရင်ဟာလည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲတလျှောက်လုံးတွင် ဤတကြိမ်သာ မွတ်ဆလင်များဘက်က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
ဖြစ်သူ ဂျာမနီပြည့်ရှင် ဖရက်ဒရစ်သည် ခရစ်ယန်မြေကို
( အများသိကြသည့် ရော်ဘင်ဟုမှာ ဤရစ်ချတ်ဘုရင် လက်ထက်တွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရစ်ချတ်ဘုရင် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေချိန်တွင် အင်္ဂလန်တွင် ကျန်ရစ်သည့် မြို့စား၊ နယ်စားများက ပြည်သူပြည်သားများကို ဖိနှိပ်မှု့ကြောင့် ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရစ်ချတ်ဘုရင် အင်္ဂလန်သို့ပြန်အရောက် ရော်ဘင်ဟုနှင့် တွေ့ဆုံပြီးချိန်မှာတော့ ရော်ဘင်ဟုဟာ ဘုရင့်ဘက်သားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။)
ပိုင်သော အီဂျစ်ဘုရင်နှင့် စေ့စပ်ရေးစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း
အားဖြင့် စစ်မတိုက်ရဘဲ ဂျရူးဆလမ်းမြို့ကို ရခဲ့လေသည်။
*စတုတ္ထ ကရူးဆိ်တ်စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၂၀၂-၁၂၀၄|၁၂၀၂-၁၂၀၄]])
သို့သော် ၁၂၄၄ ခုနှစ်တွင် တူရကီတို့က ခရစ်ယန်သေဉ်
မြေကို သိမ်းပိုက်ကြပြန်သဖြင့်၊ ပြင်သစ်ဘုရင် နဝမလူဝီ
တတိယ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ အပြီးမှာတော့ ဥရောပတွင် မိမိဆန္ဒနှင့် မိမိ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ထပ်မံဆင်နွှဲလိုသူများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအထဲတွင် ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမှ နယ်စား မွန့်ဖဲ့ရာ့သည် လူသူအင်အား အတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဗင်းနစ်မြို့မှ ငွေဒင်္ဂါး ၈၅၀၀၀ ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး ဟန်ဂေရီမှ ဇဒါမြို့ကို သိမ်းပိုက်၍ သူတို့လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ ခရူးဆိတ်ခေါင်းဆောင်များက လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အင်နိုးဆန့်(Pope Innocent III) ဟာ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲရန် အစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ကာ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ပြီးလျှင် ဆဋ္ဌမကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ (၁၂၄၇-၁၂၅၄)ကို
ဆင်နွှဲကြပြန်သည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် ထိုစဉ်အခါက ပါလက်စတိုင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ ခရူးဆိတ်ခေါင်းဆောင်များကို ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာရဲ့ မင်းသား အန်ဂျလို့(Angelos)ဟာ သူ့ဦးလေးဖြစ်သူ ဘိုင်ဇန်တိုင်းဘုရင် အယ်လက်ဇီယို(Alexio III)ကို နန်းချပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ အယ်လက်ဇီယို(Alexio II)အား နန်းတင်ပေးပါက ငွေဒင်္ဂါး နှစ်သိန်းပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းရာ ခရူးဆိတ်ခေါင်းဆောင်များက သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များ အကူအညီနဲ့ အယ်လက်ဇီယို(Alexio II) နန်းရသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဒီထီးနန်းဟာ မိသားစုပိုင်ထီးနန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ပြန်ယူခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကူညီပေးတဲ့ခရူးဆိတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ငွေတပြားမှ မပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ခရူးဆိတ်ခေါင်းဆောင်များဟာ အမျက်ချောင်းချောင်း ထွက်ပြီး ဘိုင်ဇန်တိုင်းအင်ပါယာရဲ့မြို့တော် ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြရာ ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ စတုတ္ထကရူးဆိတ်စစ်ပွဲဟာ မွတ်ဆလင်များကို တိုက်ခိုက်ရန်စုစည်းခဲ့ပေမယ့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ စိတ်ထား ပြောင်းလဲမှု့နှင့်အတူ ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကြီး ကျဆုံးမှု့နှင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင်နယ်မြေများသို့ မချီတက်လိုက်ရပေ။
သို့ တက်ရောက်ရာ အချက်အခြာဖြစ်သည့် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့
ချီတက်တိုက်ခိုက် လေသည်။ ထိုစစ်ပွဲတွင် ခရစ်ယန်တို့ဖက်မှ
<nowiki>*</nowiki>ပဥ္စမကရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၂၁၇-၁၂၂၁|၁၂၁၇-၁၂၂၁]])
အရေးနိမ့်၍ လူဝီဘုရင်ကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံရပြီးလျှင်၊ ကြေးငွေ
အမြောက်အမြား ပေး၍ ရွေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့လေသည်။
၁၂၁၅ခုနှစ်မှာတော့ ပုပ်အင်နိုးဆန့်(Innocent III)ဟာ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် ထပ်မံ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်တနှစ်အကြာမှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူ့နေရာကို ဆက်ခံတဲ့ ပုပ်ဟိုနိုးရီးယက်(Honorius III)ဟာ မွတ်ဆလင်တို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ခရစ်ယာန်နယ်မြေများကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန် ဟန်ဂေရီဘုရင် အန်းဒရူး(Andrew II)နဲ့ သြစတြီးယားဘုရင် လီအိုပို(Leopold IV) တို့ကို ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များအား ဦးဆောင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်ဘုရင် စိန်လူဝီနှင့်အင်္ဂလန်ပြည်ဘုရင် ပထမအက်ဒွပ်
မင်းသားတို့ ခေါင်းဆောင်၍ သတ္တမ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲကို စတင်
၁၂၁၉မှာတော့ ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ ဒမီတာနှင့် အယ်လ်ကာမီတို့ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ်ဘုရင် စူလတန် အာယုဘစ်ဟာ ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များကို ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ဟာ အီဂျစ်ပြည်တခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ရန် ရည်မှန်းထားသည့်အတွက် စူလတန် အာယုဘစ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး အီဂျစ်သို့ ချီတက်လာခဲ့ရာ လမ်းတလျှောက်ရှိ မြို့ရွာငယ်များ ထောင်းလမောင်း ကြေကုန်ပါတော့သည်။ ၁၂၂၁ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ နိုင်းမြစ်ဝှမ်း မြစ်ရေကြီးမှု့ကြောင့် ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ခဲ့ဘဲ တန့်နေရာမှ ရိက္ခာရှားပါးမှု့နှင့် ရောဂါဘယတို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် ဆူလတန် အာယုဘစ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု့ကို လက်ခံခဲ့ရကာ စစ်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး ပဥ္စမကရူးဆိတ်စစ်ပွဲ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကြပြန်သည်။ သို့သော် စိန်လူဝီမှာ စစ်တိုက်နေယင်း ပလိပ်
ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွား၍၊ ခရစ်ယန်သူရဲကောင်းများ
*ဆဌမ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၂၂၈-၁၂၂၉|၁၂၂၈-၁၂၂၉]])
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သော ပါလက်စတိုင်းပြည်ရှိ မြို့ကြီး
များသည်လည်း တစ်မြို့ပြီးတမြို့ မွတ်စလင်များလက်သို့
ဆဌမ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲကတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ ဆင့်ခေါ်မှု့ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ရောမအင်ပါယာဘုရင် ဖရက်ဒရစ်(Fredrik II)ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ အမိန့်မပါတဲ့အတွက် ဖရက်ဒရစ်ရဲ့ စစ်တပ်ကို ပါလက်စတိုင်းဒေသရှိ ခရစ်ယာန်နယ်မြေများမှ ဝတ်ကျေတန်းကျေ သာကူညီခဲ့ကြပေမယ့် ၁၂၂၉ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ဖရက်ဒရစ်ဟာ စူလတန် အာယုဘစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဂျေရုဆလင်ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိတ်ခံခဲ့ပါတယ်။ စူလတန်အာယုဘစ်နှင့် ၁၀နှစ် စစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ်ကိုလည်း ထပ်မံချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ဆဌမ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲဟာ သွေးထွက်သံယို မရှိဘဲ ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ၁၀နှစ်ပြည့်ပြီးနောက် ၁၂၄၄မှာတော့ အီဂျစ်-တူရကီ မွတ်ဆလင်တပ်ပေါင်းစုဟာ ဂျေရုဆလင်ကို ပြန်လည် တိုက်ခိ်ုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျရောက်ကြလေသည်။ ၁၂၉၁ ခုနှစ် အလွန်တွင် ကရူးဆိတ်
*သတ္တမခရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၂၄၈-၁၂၅၄|၁၂၄၈-၁၂၅၄]])
ဂျေရုဆလင်ကျဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အင်နို့ဆန့်(Innocent IV)ဟာ သတ္တမ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် ဆော်သြခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ် လူဝီဘုရင်(Louis IX)ဟာ ခရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့များကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၂၄၈ တွင် အီဂျစ်သို့ တိုက်ရိုက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂၄၉မှာတော့ ဒီမီတာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုင်ရိုသို့ ဆက်လက်ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ ဖာရီစကာ တိုက်ပွဲမှာတော့ လူဝီဘုရင်ရဲ့တပ်ဟာ စူလတန်တူရန်ရှားရဲ့ တပ်များကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး လူဝီဘုရင်ကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကရူးဆိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ ရွှေဒင်္ဂါး ရှစ်သိန်းနှင့် ဒီမီတာ မြို့ကိုပါ မွတ်ဆလင်တို့လက်ထဲပေးအပ်ခဲ့ပြီး လူဝီဘုရင်ကို ပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ လူဝီဘုရင်ဟာ ပြင်သစ်သို့ မပြန်သေးပဲ ဂျေရုဆလင်မြို့ကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်နေပြန်ပါတယ်။ ၁၂၅၄မှာတော့ လူဝီဘုရင်ရဲ့ မိခင် ဘလန်ချီ ကာစတန်လီ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် လူဝီဘုရင်ဟာ ပြင်သစ်သို့ တပ်ပြန်ခေါက်သွားပြီး သတ္တမ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲဟာလည်း အရှုံးနှင့် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
*အဌမခရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး (၁၂၇၀)
မွတ်ဆလင်တို့ဟာ တဖြည်းဖြည်း အင်အားတောင့်လာခဲ့ကြပြီး ဂျက်ဖာနှင့် အန်းတွိုက်မြို့များကိုပါ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသတင်းကို ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ(Louis IX) ဟာ အာရပ်နယ်မြေသို့ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြေညာကာ ရေလမ်းဖြင့် ထပ်မံချီတက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ၁၂၇၀ ဇူလိုင်လမှာတော့ တူးနစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့သို့ ကမ်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ တူးနစ်တွင် ကမ်းတက်ပြီးလျင်ပြီးချင်း လူဝီဘုရင်ရဲ့ တပ်များဟာ တူးနီးရှား စစ်တပ်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ချေမှုန်းမှု့ကို ခံခဲ့ရပြီး လူဝီဘုရင်လည်း ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လူဝီဘုရင်ကျဆုံးပြီးနောက်မှာတော့ အကိုဖြစ်သူ ချားလ်ဟာ တူနီးရှားတွေနဲ့ အလျင်အမြန် စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့ပြီး တူးနစ်မှ ပြင်သစ်သို့ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကာ အဌမ ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲမှာလည်း အရှုံးနှင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
*နဝမခရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး ([[Tel:၁၂၇၁-၁၂၇၂|၁၂၇၁-၁၂၇၂]])
ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ ကျဆုံးသွားပြီဟု သတင်းရရခြင်းမှာပဲ အင်္ဂလန်နန်းလျာ အက်ဒွပ်(Edward I)ဟာ အလျင်အမြန်စစ်ချီခဲ့ပြီး ၁၂၇၁ နွေဦးပေါက်မှာတော့ အေကာမြို့မှာ အခြေစိုက်ပြီး လူအင်အားပြန်လည်စုစည်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဗင်းနစ်နှင့် ဂီနိုအာမြို့များကလည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရင်း စီးပွားဖြစ်နေသောအခါ အက်ဒွပ်ရဲ့ ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် အစီအစဉ်ကို မထောက်ခံဘဲ လူသူလက်နက်ပစ္စည်းများ မထောက်ပံ့လိုကြတော့ပေ။ အက်ဒွပ်ဟာ အေကာမှာ တနှစ်ကျော်နီးပါး သောင်တင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆူလတန် ဘေဘာဟာ အက်ဒွပ်ကို လူသတ်သမားစေလွှတ်ကာ လုပ်ကြံစေပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
အင်္ဂလန်ဘုရင် ဟင်နရီ(Henery III) အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်နေသည်ဟု သတင်းရောက်လာသောအခါ အက်ဒွပ်ဟာ အင်္ဂလန်သို့ ပြန်သွားခဲ့ပြီး နဝမကရူးဆိတ်စစ်ပွဲလည်း အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၂၉၁ခုနှစ်မှာတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ အေကာမြို့လည်း ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်နှင့် မွတ်ဆလင်တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှု့များလည်း ခေတ္တ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ။
ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲများဟာ ရာစုနှစ် ၂ခုအကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ရှည်လျားတဲ့ စစ်ပွဲကြီး ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စစ်သည်ပေါင်း ၅သန်းနှင့် ၆သန်းအကြား သေဆုံးခဲ့ပြီး အရပ်သားပေါင်း ရသိန်းနီးပါး(ပိုချင်ပိုပါ့မယ်) အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်ဖက်တပ်များဟာ စစ်ရာဇဝတ်မှု့များ၊ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု့များ၊ မုဒိန်းမှု့များနှင့် လုယက်မှု့များကို မရေမတွက်နိုင်အောင် ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်အတွင်း ကရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီးများ တစ်ခု
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/501134" မှ ရယူရန်